Nyere gị aka ngwa ngwa ịghọta ụkpụrụ na-enye ọkụ nke anyanwụ na uru nke ike anyanwụ - Sresky
Nyere gị aka ngwa ngwa ịghọta ụkpụrụ na-enye ìhè nke anyanwụ na uru nke ike anyanwụ
Ụkpụrụ na-enye ìhè nke oghere anyanwụ
Igwe ọkụ anyanwụ bụ akụkụ bụ isi na akụkụ kachasị mkpa nke usoro mmepụta ọkụ ọkụ anyanwụ
Enwere ụzọ abụọ nke mmepụta ike anyanwụ. Otu bụ usoro ntụgharị ọkụ na ọkụ na ọkụ eletrik, nke ọzọ bụ usoro ntụgharị ọkụ ọkụ na ọkụ eletrik.
Ọkụ ọkụ nke anyanwụ bụ ịtụgharị ike anyanwụ ka ọ bụrụ ike eletrik site na akụkụ anyanwụ. Ma bufee ya n'ime batrị site na njikwa anyanwụ nwere ọgụgụ isi. Mgbe abalị dara ma chọọ ka ọkụ, ike dị na ngwugwu batrị na-apụta na LED site na njikwa nwere ọgụgụ isi (ntụnyere sekit ntụnyere) iji mee ka ọ na-ebunye ọkụ a na-ahụ anya.
Uru nke ike anyanwụ. Ike anyanwụ nwere ọtụtụ uru pụrụ iche:
Akụ ọkụ anyanwụ dị mma ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya, na-enye ya kwụsiri ike. Na agaghị emetụta ike nsogbu na mmanụ ụgbọala ahịa ejighị n'aka.
Enwere ike iji ihe ọkụ anyanwụ mee ihe n'ebe ọ bụla, karịsịa n'ebe ndị dịpụrụ adịpụ nwere ụkọ ọkụ. Nke nwere ike ibelata owuwu nke grids ọkụ dị anya na mfu nke eriri nnyefe.
Ọgbọ nke ike anyanwụ anaghị achọ mmanụ ọkụ, nke na-ebelata ụgwọ ọrụ nke ukwuu;
Ike anyanwụ bụ ezigbo ume dị ọcha. Igwe ọkụ anaghị emepụta ihe ndị na-emerụ ahụ ma bụrụ ezigbo enyi na gburugburu ebe obibi.
Uru nke oghere anwụ nke Sresky ji:
Ịdị mma nke anyanwụ na-ejikọta na àgwà nke oriọna anyanwụ dum. Na ntughari arụmọrụ ya dịkwa oke mkpa.
Ihe mkpuchi anyanwụ nke Klas A nke Sresky na-eji nwere ogologo ndụ ọrụ yana arụmọrụ ngbanwe dị elu.
Klas A cell:
A na-eji bọọdụ klaasị A na nnukwu ọdụ ọkụ. Selụ eji bụ mpempe klas A. Ihe e ji mara ụdị ihe nkiri a dị mma ma dị mma. Mbipụta ahịrị grid electrode zuru oke, enweghị grids agbajiri, enweghị ntụpọ n'elu, enweghị ntapu nke slurry. Enweghị mgbawa zoro ezo, enweghị ncha, enweghị isi ojii, enweghị mgbagha ugbu a, arụmọrụ eletrik kwụsiri ike, wdg, arụmọrụ ntụgharị dị elu> 21.5%
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọkụ okporo ụzọ anyanwụ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị
2020 ISO akwụkwọ
Ọkụ mgbidi anyanwụ na-ere kacha mma na nyiwe niile
Top 10 na-ere ọkụ okporo ụzọ anyanwụ na nyiwe niile
Kachasị mma niile n'otu ọkụ okporo ụzọ anwụ, onye nrụpụta kacha elu na China
Ahapụ a Comment Kagbuo aza
Pịnye ebe a ..
20 kacha mma ndị na-emepụta ọkụ n'okporo ámá anyanwụ
Ọkụ n'okporo ụzọ anwụ na-adị n'otu niile na otu ìhè okporo ụzọ anyanwụ niile n'otu ụlọ ọrụ ọkụ n'okporo ámá anyanwụ ha niile dị n'otu ụlọ ọrụ ọkụ n'okporo ámá anyanwụ ọkụ mgbidi anyanwụ kacha mma china gbara ọchịchịrị na-akwado ọkụ okporo ụzọ ndị na-emepụta ọkụ odida obodo china china anyanwụ edu odida obodo ọkụ azụmahịa anyanwụ azụmahịa anyanwụ odida obodo ọkụ chi jiri ruo chi ọbụbọ ọkụ anwụ anwụ Integrated anyanwụ n'okporo ámá ọkụ ip65 mmiri adịghị ọkụ na-edu anwụ ọkụ ìhè akara mgbede ngagharị ihe mmetụta arịọnụ mgbodo n'èzí ìhè n'èzí anyanwụ ogige ìhè Review n'èzí ìhè mgbidi anyanwụ Review ebe a na-adọba ụgbọala ike ọkụ Njikwa igwe nche ọkụ Ìhè mpaghara anyanwụ ọkụ iju mmiri nke anyanwụ Ìhè ogige anyanwụ ọkụ ogige ogige anyanwụ Onye na-emepụta ọkụ ogige anyanwụ Ìhè Ọwụwa Anyanwụ ọkụ odida obodo anyanwụ ọkụ anyanwụ odida obodo Mbara Anyanwụ mbara igwe ada anyanwụ na-eduga okporo ụzọ ike anyanwụ ìhè anyanwụ n'okporo ụzọ ụlọ ọrụ ọkụ n'okporo ámá anyanwụ onye na-emepụta ọkụ n'okporo ámá anyanwụ Solar n'okporo ámá ọkụ Ọnụ ọkụ okporo ụzọ anyanwụ Ìhè mgbidi anyanwụ ọkụ anyanwụ
Azụmahịa niile n'otu ọkụ anyanwụ
Ọkụ ọkụ ọkụ anyanwụ 10 ama ama nke Amazon
Ọkụ ọkụ nke anyanwụ chọrọ ìhè anyanwụ kpọmkwem? Oleekwa otú ọkụ n'èzí anyanwụ ogige ụzọ ọkụ kwesịrị ịdị?
Kedu otu esi arụkwa ọkụ ọkụ nke anyanwụ kwadoro? Na otu esi eme ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ?
10 Igwe ọkụ ọkụ anwụ anwụ na-ere nke ọma
Otu esi agbanwe batrị na ọkụ ogige anyanwụ?
Kedu ụdị batrị maka ọkụ ogige anyanwụ? Kedu ihe dị iche na batrị ndị ọzọ?